NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု။ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | NOTICIAS, အကြံပြုပါသည်
ငါဟာယနေ့ခေတ်လူအများစုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးလက်တွေ့ကျသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုလူအများစုအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ site ကိုခေါ် NoGAFAM, အထဲတွင်ရှိပြီးသားသောထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်နှင့်ညှိသည် FromLinux ဘလော့ ငါတို့သည်အခြားပို့စ်များကိုအပေါ်ထိမိပါပြီ။
NoGAFAM ၎င်းသည်ဆိုက်တစ်ခုတည်းသာမကဘဲ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအားပေးအားမြှောက်အခြားသူများကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်သောအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုသတိပြုမိလာသည်များစွာသောပလက်ဖောင်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခါသူတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ် Tech Giants အဖြစ်လူသိများကြသည်များစွာသောအရာကမ္ဘာကြီးကို GAFAM.
1 GAFAM နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၏အလွဲသုံးစားမှု
2 NoGAFAM - ဒေတာထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရယူပါ
နည်းနည်းပြန်ပြောပြ, ငါတို့၏အကြောင်းအရာအပေါ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ထိမိပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် GAFAM နှင့်ဟူသောဝေါဟာရကိုဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာထပ်မံရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေရန် GAFAM ၎င်းင်းတို့ကိုလိုအပ်သူများအတွက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါစာပိုဒ်ကိုကိုးကားပါမည် အဟောင်းကိုဆက်စပ် post ကို သင်ဤအကြောင်းအရာကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသင်လည်ပတ်နိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲထားခဲ့မည်။
"အခြေခံအားဖြင့် «GAFAM» အဆိုပါအတိုကောက်ကဖွဲ့စည်းအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် «Gigantes Tecnológicos» အင်တာနက် (ဝဘ်) ၏၊ «Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft»အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးသောအဓိကကုမ္ပဏီငါးခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင် Big Five (The Five) ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။".
သင့်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန်၊ ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် မကြာသေးမီကဆက်စပ် post ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟုခေါ်သောကြောင့်လက်ရှိတွင်အလွန်ဖက်ရှင်ကျသောဤဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ "လူမှုရေးအကြပ်အတည်း" ဒါမှမဟုတ်စပိန်လို "လူမှုကွန်ယက်များအကြပ်အတည်း"။ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာနက်နက်နဲနဲထိတွေ့မှုကြောင့်
"သူတို့၏အချိန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်လူများတွင်ဖန်တီးသောလက်ရှိစွဲလမ်းမှုသည်အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဤတူညီသောဒြပ်စင်များကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကိုသိမ်မွေ့စွာချိုးဖောက်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်အချို့သို့မဟုတ်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်အချို့သောတိကျသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊".
ထို့အပြင်၎င်းစာမူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာခဲ့သောအခြားသူများနှင့်ကောင်းမွန်သောအချိတ်အဆက်များရှိသည် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး။
NoGAFAM - ဒေတာထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရယူပါ
El NoGAFAM ကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသူအရသိရသည်
"လေထဲရှိလက်သီးကိုမြှင့်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သောဤနည်းပညာဆိုင်ရာအချုပ်အခြာအာဏာကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု / ဆော့ဝဲလ်၏ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုအဆိုပြုရန်၊ ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သောအချက်အလက်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ရရှိရန်ဒေသခံတစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကူညီရန်။ လူမှုရေးအရနှင့်စီးပွားရေးအရပိုမိုရိုးရှင်းပြီးပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောဘဝ".
အသစ်သောရေနံပြည်သူ့ဒီဂျစ်တယ်နဲ့အွန်လိုင်းအချက်အလက်တွေကိုဘယ်မှာရည်ညွှန်းတာလဲ။ ထို့ထက်ကား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာပေါ်ရှိ GAFAM နှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများ၏မကောင်းသောအလေ့အကျင့်များ၊ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားသီးသန့်အကြောင်းအရာများကိုပေးပါသည်"ဒါမှမဟုတ်"သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်"။
ငါတို့ဆီကဘာအချက်အလက်တွေခိုးယူခံရသလဲ။။ အခြားဒေတာများအကြားအသုံးပြုမှုအချက်အလက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဒေတာများ၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ရွေ့လျားမှုဒေတာများကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့မှစုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောနေရာ။
ထိုအ ... ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြသနည်းဖြေ - ဒီနေရာမှာပူးပေါင်းပါ ၀ င်ရန်၊ သတိပြုရန်နှင့်ဖိတ်ခေါ်ထားသည့်ထင်ရှားသောအခြေအနေကိုအရေးယူရန်ဖိတ်ကြားသည့်နေရာ။
အဆိုပါစာရွက်။ ငါတို့ဘာလိုအပ်လိမ့်မလဲ။ဖြေ။ ။ ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်မှာဖော်ပြထားသလဲ။ ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များအနက်မှအောက်ပါ ၃ ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားပါမည်။
ပိုပြီး free software နှင့်လျော့နည်းကြမ်းတမ်း privacy ကို software ကို။
နည်းသော Microsoft Windows နဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင်း ဘယ်ဟာကလဲ။ မူလက။
နည်းသော Google က Chrome ကို ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင်း Mozilla Firefox ကို မူလက။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုဒ်ကိုသိဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် NoGAFAM နှင့်အဆုံးသတ်မြင်ကွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့မဟုတ်အစားထိုးရရှိနိုင်အခြားနည်းလမ်းများအတွက်၎င်းတို့၏အကြံပြုချက်များကြာပါသည် စီးပွားဖြစ်နှင့်စီးပွားဖြစ် software အားဖြင့် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း software ကို.
တဖန်သင်တို့အပေါ်ဤအချက်အလက်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအခြားနည်းလမ်း အောက်ပါကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် link ကို နှင့်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အစီအမံများသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်။ဒေတာကာကွယ်မှုစာရင်း»ဖန်တီးခြင်းနှင့်မကြာခဏအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ချစ်သူများနေ့ ခေါ် Telegram အုပ်စုကနေ privacy နှင့် OpenSource.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဟုခေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်လက်တွေ့ကျကျက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း «NoGAFAM»သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည် ကြီးမားတဲ့ဒိုမိန်းကိုအဆုံးသတ်သို့မဟုတ်လျှော့ချ အနည်းငယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာ Giants ဒေသခံတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးရန် ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ပြန်လည် ထုတ်လုပ်မှုသည်များစွာသောအခြားသူများအကြားအလွန်အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု
Gafam အသုံးပြုသူ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် 120TB ထက်ပိုသောမည်သည့်နေရာကိုသိမ်းဆည်းထားသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည် Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး gafam ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းမလွှဲမရှောင်သာကျွန်ုပ်သည်သုံးစွဲသူရာပေါင်းများစွာနှင့်မည်သို့မျှဝေမည်နည်း။
User gafam အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
မင်္ဂလာပါ, GAFAM အသုံးပြုသူ။ တီဘီ ၁၂၀ သည်ကြီးမားသည်။ Mastodon အတွက် NoGAFAM ပလက်ဖောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဆက်သွယ်ပါ (@ admin @ masto.nogafam.es) ကိုသူကသူ့ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုမှာသင့်အားမည်သည့်ရွေးချယ်မှုများပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။ ထိုအကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သင့်မှတ်ချက်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်လူသားတို့၏ဘ ၀ တိုးတက်မှုကိုရသည့်နိူင်ငံအရဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုပိုမိုဆင်းရဲချို့တဲ့စေပြီး Mass Surveillance အပေါ် အခြေခံ၍ အရင်းရှင်စနစ်၏လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ »
မင်္ဂလာပါ Nemecis1000 ။ ပုဒ်မ“ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်လူသားတို့၏ဘ ၀ တိုးတက်မှု၏နိဂုံးအောက်တွင်၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရရှိသည်၊ လူ ဦး ရေကို ပိုမို၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးစေသည်။ Mass Surveillance အပေါ် အခြေခံ၍ အရင်းရှင်စနစ်၏လက်နက်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်း” အပိုင်းမှ“ နယူးယောက်” « NoGAFAM2 »မှရေနံ။ ၄ င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန်ကဏ္ from တစ်ခုစီမှကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကိုသုံးပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, NoGAFAM သိနှင့်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကောင်းတစ် ဦး က်ဘ်ဆိုက်နှင့်တူပုံရသည်။
Nextcloud Hub 20 သည်ပေါင်းစည်းမှုတိုးတက်မှုများ၊
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းမှ၎င်း၏ ၃၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပသည်